संसारकै सर्वाधिक महँगो कार, जसका मूल्य सुन्दा तपाई पर्नुहुनेछ दंग (भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /बिज्ञान प्रबिधि/संसारकै सर्वाधिक महँगो कार, जसका मूल्य सुन्दा तपाई पर्नुहुनेछ दंग (भिडियो)
काठमाडौँ सबैजसो मानिसको चाहना सामान्य जीवनलाई भन्दा पनि हाइफाइको जीवनमा रमाउने हुन्छ । मानिसको चाहना महंगो कार चढ्ने, महंगो घरमा बस्ने महंगो सामान चलाउने कुरालाई सामान्य रुपमा लिइने गरिन्छ । साहेद हामीले बताउन लागेको कार खरिद गर्न जो कोहि मानिसले सक्दैन् । यस्तो किसिमको कारलाई खरिद गर्नु भन्दा पनि यस्तो महंगो हुन्छ र ? कार भनेर आश्र्चय मान्नुपर्ने हुन्छ । कारलाई देख्दा पनि लाग्ने छ कि यस्तो किसिमको कार पनि हुन्छ र ?
१.टोयोटा फेमेली कन्सेस्ट कार – यो कार परिवारलाई ध्यानमा राखिएर बनाएको कार हो । जुनकारमा ७ वा ८ जना जति आरामले अट्नेछ । कारमा एलएटी स्कीन रहेको कारणले गर्दा आफ्नो सेन्सरले बाहिरको इन्र्फरमेशनको बारेमा जानकारी लिन सजिलै सकिनेछ । घुम्नको लागी उक्त कारलाई बेस्ट चोइसको रुपमा लिन सकिन्छ ।
२.जगुआर फ्युजर कार – जगुआर फ्युजर कारको डिजायन जगुआर कम्पनीले गरेको हो । जो व्यक्ति त्यहा जान्छ त्यस व्यक्तिलाई ध्यान,मन अनि मतिष्कले त्यस कारको बारेमा मात्र सोच्ने गर्दछ । यस्तो किसिमको कार निकै सुन्दर, आकर्षक र फरक किसिमको छ । उक्त कार ब्याक र ग्रे कलरमा बनाइएको कारमा एक मजबुद टेक्नोलोजि राखिएको छ ।
३. वोक्सवैगन सेडरिक – बिना डा«इभर बिना कार चलाउने कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । तर यस्तो कार चलाउनको लागी डा«इभर चाहिदैन् । कोहि मानिस कारको सामू आएको कुरा कारको सेन्सरले पत्ता लागी कारको ब्रेक लाग्नेछ । उक्त कारमा यात्रा गर्ने मानिसले इन्टरनेट चलाउन सक्ने, फिल्म हेर्न सक्ने र कम्युटरमा भिडियो गेम खेल्न पनि सक्नेछन् ।
४. लम्बोगिनी बेलाडोर – यस कारलाई फ्युचरलाई ध्यान दिएर बनाएको हो । उक्त कारमा हाइब्रिड इन्जिङ् राखिएको छ , किनकि डा«इभरलाई सजिलैसगँ कार चलाउनका लागी निकै राम्रो अनुभव मिल्योस् । यस्तो कारमा चढेर यात्रा गर्दा हावा उठेको वा हावा सगँ कुरा गरेको फिल हुनेछ ।
५. टिउनवय मार्को – यस कार २०११ मा एक च्यालेन्ज कम्पिटिसनमा जितेको थियो । किनकि यस कारको डिजाइन अरु कार भन्दा निकै युनिक र निकै सानदार थियो ।यस कारमा आवाज प्रयोग गरेर रोक्न र चलाउन र कन्टोल गर्न सकिनेछ । यस कारलाई संसारकै सबैभन्दा स्मार्ट कारको रुपमा लिइन्छ ।
मेनुका पौडेलको ‘मनले आफै छल गर्दैन’ बजारमा (लिरिकल भिडियोसहित)
मेनुका पौडेलले ‘मोहे रंग दो लाल’ गाउदा जजले खुलेरै तारिफ गरे, तनुले के भनीन् ? (भिडियोसहित)
श्रृङ्खला ताजको नजिक, आज फाइनल, यस्तो छ तयारी, के भन्छन् पूर्व मिस नेपाल ? (भिडियो)
नेपाल आइडलमा आज प्रसारण हुने एपिसोडमा यी प्रतिस्पर्धीले दिए यस्तो नौलो प्रस्तुति (भिडियो सहित)